भरतपुर अस्पतालमा द्धन्द्ध तथा हिंसा पिडितका लागि सहज सुविधा – Saurahaonline.com
भरतपुर अस्पतालमा द्धन्द्ध तथा हिंसा पिडितका लागि सहज सुविधा
चितवन कार्तिक २४ । द्धन्द्ध तथा हिंसा पिडितका लागि भरतपुर अस्पतालमा दिईने सेवा सुविदा सहजबनाईने भएको छ । अस्पतालबाट दिईने सेवामाउनीहरुकालागिविशेष सुविदाल्याउनलागिएको । शान्तितथापूर्ननिमार्ण मन्त्रालयअन्र्तगतको शान्तिकोष सचिवालयको सहयोगमा सेवा सुविदा सहितको प्याकेज ल्याउनलागिएको हो ।
यो विषयमाशान्तिकोष सचिवालयसंग भरतपुर अस्पतालले सम्झौतागरेको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेण्डेण्ट डा. रुद्रप्रसाद मरासिनी र कोषकातर्फबाट कार्यकारी निर्देशक हरि प्रसाद पाण्डेले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
द्धन्द्ध र हिंसा प्रभावितहरुको लागिउपचारसंगै अति विशिष्ट सेवालाई थपविस्तार गरिने सुरु गरिने अस्पतालका मेसु डा. मरासिनीले बताउनुभयो । यसले गर्दा द्धन्द्ध प्रभावित संगै आमनागरिकलाई पनिथप सुविदाहुने उहाँले बताउनुभयो । अस्पतालको प्रस्तावना स्विकार गरेर शान्तिकोष सचिवालयले कार्यक्रमकालागि सहयोग गरेको हो ।
द्धन्द्ध र हिंसाप्रभावितभएका घाईते र अपाङ्गताभएकाहरुलाई अति विशिष्ट सेवा सुरु गरिने छ । न्यूरो सर्जरी , हार्डजोर्नी , स्पाईनल ईन्जुरी लगाएतको सेवाकालागिउपकरण ल्याउनशान्तिकोष सचिवालयले आर्थिक सहयोग गर्नेभएको छ । त्यस्तै अस्पतालमा महिलाको स्तनक्यान्सर परिक्षणका लागिप्रयोग हुने मेमोग्राफी मेसिनपनिल्याईने जनाईएको छ । यसले अस्पतालको सेवालाई थपप्रभावकारी बनाउने भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष राजकुमार राजभण्डारीले बताउनुभयो । द्धन्द्ध र हिंसाबाट पिडित भएकाहरुको सेवाकालागि राम्रो ब्यवस्थापनका साथ सेवा सुरु गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।